कोरोना परीक्षण : एउटामा पोजेटिभ, अर्कोमा नेगेटिभ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना परीक्षण : एउटामा पोजेटिभ, अर्कोमा नेगेटिभ!
बुटवल , रुपन्देहीको बुटवलका मानिसलाई हिजोआज एउटा समस्याले सताइरहेको छ। त्यो हो कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट। बुटवलका दुइटा प्रयोगशालाले एकै व्यक्तिको फरक/फरक रिपोर्ट दिएपछि मानिसहरू तनावमा छन्। प्रयोगशालाप्रति नै मानिसको विश्वास घटेको छ, हैरानी बढाइदिएको छ। प्रादेशिक प्रयोगशाला भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र नेशनल प्याथल्याब बुटवललाई पिसिआर परीक्षणको अनुमति छ। तर बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र नेशनल प्याथ ल्याबमा एउटै व्यक्तिको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट एउटामा पोजिटिभ र अर्कोमा नेगेटिभ आएको छ।
गत अगष्ट २३ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरेका बुटवलका २० वर्षीय पुरूषको पिसिआर गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखायो। उनको स्वाब नमूना नम्बर ८६९७ हो। उनले भोलिपल्ट नेसनल प्याथ ल्याबमा फेरि स्वाब परीक्षण गराएका थिए। …..१२२२ आइडी नम्बर भएका उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। उनले अर्को दिन अगष्ट २५ मा नेशनल प्याथ ल्याबमा फेरि परीक्षण गरे। आइडी नम्बर ….१३७४ भएका उनको रिपोर्ट नेगेटिभ नै आयो। तर त्यसको भोलिपल्ट अगष्ट २६ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा भने उनको रिपोर्ट पुनः पोजिटिभ नै आएको छ।
प्रयोगशालाको नमूना नम्बर १०८३७ बाट २६ अगष्टमा गरिएको उनको पिसिआर रिपोर्टको नतिजा पोजिटिभ आएपछि उनी अहिले आइसोलेनमा छन्। एउटा प्रयोगशालामा नेगेटिभ र अर्कोमा पोजेटिभ आएको कारण आफू संक्रमित हो कि होइन भन्ने नै पहिल्याउन नसकेको उनले बताए।